यसपाली धनगढीको मेयरमा गोपी हमालको जित पक्का ! « Ok Janata Newsportal
यसपाली धनगढीको मेयरमा गोपी हमालको जित पक्का !
काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरेका गोपी हमालले चुनावी प्रचारप्रसार र भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । लामो समयदेखि भ्रष्टमुक्त धनगढीको अभियान थालेका हमाललाई त्यहाँका जनताले रुचाएका छन् ।
आफू पनि भ्रष्ट्राचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने अभिप्रायबाट चुनावमा होमिएका हमालको चर्चा बढ्दै गएको छ । सफल उद्यमी हमाल कुनै पनि लोभलालच नबोकी धनगढीलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले निर्वाचनमा होमिएका हुन् । आफ्नो स्वयं उद्यम भएका व्यक्ति जनताको जनप्रतिनिधि बनेपछि भ्रष्ट्रचार नगर्ने मानसिकताले धनगढीका आधाभन्दा बढी जनता उनको पक्षमा उभिएका छन् ।
मेयरमा विजयी हासिल गरेपश्चात सरकारको सेवासुविधा पनि नलिने बताएका हमाल सम्पन्न परिवारका व्यक्ति हुन् । आफ्नो मेहनत र परिवारको मेहनतले उनलाई सफल उद्यमी बनाइसकेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न पार्टीहरुमा आवद्ध भएकाहरुले जनतालाई प्रलोभन देखाएर र पार्टी उनीहरुको सर्वेसर्वा हो भन्ने भ्रम चिर्न हमालको उम्मेद्वारीलाई गतिलो उदाहरणका रुपमा हेरिएको छ ।
हमाल आफू पनि विभिन्न उद्यममा सक्रिय बनेका उम्मेद्वार हुन् । बितेका पाँच वर्षसम्म धनगढीले सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा पनि हमालको उम्मेद्वारी परेको त्यहाँका जनताहरु बताउँछन् । एकपटक सफल व्यवसायीलाई परीक्षण गर्ने त्यहाँका जनताको अपेक्षा रहेको छ ।
विभिन्न पार्टीमा आवद्ध भएकाहरुपनि हमालको उम्मेद्वारी पनि उनलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहेका छन् । हमाल विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो नितान्त व्यत्तिगत खर्चबाट धनगढीमा विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएका छन् ।